Sina hafa Factory, ny hafa mpamatsy
Ilay mixer emulsifying vacuum dia novolavolaina sy novokarin'i JINGYE dia in-kettle fanaparitahana sy famongorana ny homogenizing dingana rafitra ho an'ny fikarohana sy ny famokarana ny fampifangaroana avo viscous fitaovana.
Ny rafitra dia manana rafitra mampihetsi-po, homogenizing/ emulsifying rafitra, rafitra fanamafisana, rafitra tsindry banga, rafitra fihenam-bidy sy tsindry, rafitra fananganana, rafitra fanaraha-maso elektrika ary sehatra fandidiana, sns.
Misy karazana andrana, karazana pilotra ary karazana famokarana indostrialy ho safidin'ny mpanjifa, ary afaka manome serivisy manokana arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
JINGYE , ro Ny fitsaboana rano dia mampiasa ny teknolojia RO hitsaboana rano，RO dia karazana teknolojia fisarahana amin'ny membrane izay nampiasa fahasamihafana tamin'ny tsindry membrane mba hampisarahana ny rano manta amin'ny vahaolana matanjaka mankany amin'ireo malemy. Mety ny mitsabo saika ny karazan-drano rehetra toy ny rano fantsakana, rano mikoriana, rano anaty rano, ranonorana, rano fisotro (rano mangatsiaka) ary ranomasina. Amin'ny ankapobeny, io no dingana ara-toekarena indrindra amin'ny famoahana ny rano tsy misy rano sy rano an-dranomasina. Tsy manana fikirakirana simika mampidi-doza izy io ary mety amin'ny tontolo iainana madio.
JINGYE Ronono Homogenizer mandefa ny ronono any amin'ny valizy homogenizing ambanin'ny goavana tsindry, ka ny zavatra mivezivezy amin'ny elanelana kely misy eo amin'ny valizy valizy sy ny seza valizy ary iharan'ny hetsiky ny hery be pitsiny toy ny fikorontanana, fisafoahana ary fanety. Ny emulsion na fampiatoana tany am-boalohany dia voahodina ho lasa emulsion-dronono-dronono tsara na mitovy na fanaparitahana ranoka-solid.
JINGYE Colloida Mmarary dia vita tamin'ny fitotoan'ny lohany, faritra ampitana, base môtô manokana.
JINGYE AN'NY TAOZAVA-BAVENTY Deep Fryer, misy vilany nendasina, rafitra SS, fantsom-panafana, boaty fanaraha-maso herinaratra, harona nendasina, mpandoro entona, valizy vent, sivana RAFITRA;
ny AN'NY TAOZAVA-BAVENTY Deep Fryer dia manana ny mampiavaka ny fandidiana mora, ny fiakaran'ny maripana haingana, ny fifehezana ny mari-pana tsara, ny fahombiazan'ny fiasa avo lenta, ny fanjifana angovo ambany, ny androm-piainana lava, ny firafitra kely, ny fikojakojana mety sns
JINGYE Steam Jackets Kettles dia manana Special hemisphere ambany miaraka amin'ny sosona palitao feno, ary nafanaina tamin'ny a marina hemispherical palitao sosona, antoka fa ny fitaovana no mafana mitovy amin'ny fizotry ny fandrahoan-tsakafo betsaka.
Ary noho ny ety amin'ny hemispherical, lehibe kokoa ny faritra fanafanana, manampy ny mpanjifa hahazo vokatra haingana amin'ny hafanana kely kokoa.
Ho fanampin'izany, ny fanafanana tsy mivantana sy ny fifehezana ny mari-pana marina dia nandresy ny sakafo’d may ary tsy mila fanaraha-maso tsy tapaka.
Ankoatr'izay, manana karazana mixer isan-karazany izahay, ho an'ny mpanjifa samihafa hahatratra ny vokatra mifangaro mifangaro.